Endrik'io pejy io tamin'ny 8 Jiona 2020 à 09:54
110 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 8 Jiona 2020 à 09:49 (hanova)
k (nanova ny anaran'i Fanekem-pinoana apostolika ho Fanekem-pinoana apôstôlika i Thelezifor)
Endrik'io pejy io tamin'ny 8 Jiona 2020 à 09:54 (hanova) (esory)
Ny '''Fanekem-pinoana apostolikaapôstôlika''' na '''Fiekem-pinoana apostolikaapôstôlika''' na '''SembolinSembôlin'ny ApostolyApôstôly''' dia [[fanekem-pinoana]] ampiasain'ny [[Fiangonana katolika|Fiangonana katôlika]] sy ny [[Fiangonana ortodoksa|Fiangonana ôrtodôksa]] ary ny [[Protestantisma|Fiangonana protestantaprôtestanta]]. Fantantra amin'ny andian-teny hoe "'''Izaho mino'''" na ny teny hoe "'''Finoana'''" na '''Simbolin'ny ApostolyApôstôly''' koa izy io.
== Tantaran'ny Fiekem-pinoana apostolikaapôstôlika ==
Ny fanekem-pinoana apostolika dia heverin'ny mpanaraka ny lovantsofina fa noforon'ireo ApostolyApôstôly. Sahala amin'ny ankamaroan'ny fanekem-pinoana kristiana dia ahitana fehezan-tsoratra telo ny Fanekem-pinoana apostolikaapôstôlika, ka ny tsirairay amin'ireo fehezan-tsoratra ireo dia atokana ho an'ny persona tsirairain'ny [[Trinite]], dia ny [[Andriamanitra Ray|Ray]] sy ny [[Zanak'Andriamanitra (kristianisma)|Zanaka]] ary ny [[Fanahy Masina]]. Ny fehezan-tsoratra voalohany dia manomboka amin'ny hoe "Mino an'Andriamanitra Ray Tsitoha"<ref name=":0"><small>Ao amin'ny dikan-teny protestanta malagasy no ahitana izany.</small></ref> na "Izaho mino an'Andriamanitra Ray Tsitoha"<ref name=":1"><small>Ao amin'ny dikan-teny katolika malagasy no ahitana an'io.</small></ref>; ny faharoa amin'ny hoe "Mino an'i JsesosyJesosy Kristy"<ref name=":0" /> na "Izaho mino an'i Jesoa Kristy"<ref name=":1" />, ary ny fahatelo dia manomboka amin'ny "Mino ny Fanahy Masina aho"<ref name=":0" /> na "Izaho mino ny Fanahy Masina"<ref name=":1" />. Ireo fanambarana telo ireo dia mifanandrify amin'ny fanontaniana telo apetraka amin'ny olona miomana hatao batisa na batemy tao amin'ny fiangonana tany amin'ireo taonjato voalohany teo amin'ny tantaran'ny [[kristianisma]].
Hatramin'ny taonjato hafa-15 dia ninoana fa ny Fiekem-pinoana apostolika dia nosoratan'ireo apostolyapôstôly, ka ny apoastolyapôstôly tsirairay dia nanolotra fehezankevitra iray avy. Tsy fantatra raha tena avy amin'ny apaostolyapôstôly marina ity fanekem-pinoana ity, nefa ny lohateniny dia toa milaza fa ny fehezankevitra tsirairay ao amin'io fiekem-pinoana io dia mampahatsiahy izay voasoratra ao amin'ny [[Testamenta Vaovao]], ary ny fanekem-pinoana dia nosoratana tamin'ny vanimpotoana niandohan'ny Fiangonana.
== Votoatin'ny Fanekem-pinoana apostolikaapôstôlika ==
=== Ilay fanekem-pinoana amin'ny fiteny grika sy latina ===
<small>Πιστεύω εἰς τò πνεῦμα τò ἅγιον, ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν, ἁγίων κοινωνίαν,</small><small> ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν, ζωὴν αἰώνιον.</small> <small>Ἀμήν."</small>
Ity fanekem-pinoana amin'ny fiteny grika ity dia mbola ampiasain'ireo Fiangonana Ortodoksaôrtôdôksa any AtsinanaAtsinanana.
==== Amin'ny fiteny latina ====
<small>Mino ny Fanahy Masina aho,</small> <small>ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao,</small> <small>ny fiombonan’ny olona masina,</small> <small>ny famelan-keloka,</small> <small>ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty</small> <small>ary ny fiainana mandrakizay.</small> <small>Amena."</small>
==== Dikan-ten'ny Eglizy Katolika ApostolikaApôstôlika RomanaRômanina eto Madagasikara ====
Toy izao ny endrik'ilay fanekem-pinoana araka ny dikan-tenin'ny [[Eglizy Katolika Apostolika Romana (Madagasikara)|Eglizy Katolika ApostolikaApôstôlika RomanaRômanina]]:
Ny Fanekem-pinoana apostolika dia ampiasain'ny ankamaroan'ny Fiangonana Tandrefana toy ny [[Katolisisma|Katolika]]<small>,</small> ny [[Loteranisma|Loterana]]<small>,</small> ny [[Anglikanisma|Anglikana]]<small>,</small> ny [[Fiangonana nohavaozina|Presbiteriana]] (na Nohavaozina)<small>,</small> ny [[Metodisma|MetodistaMetôdista]] ary ny [[Fiangonana kongregasionalista|KongregasionalistaKôngregasiônalista]]. Ny an'ny Metodista dia nanaisotra ny hoe "nidina tany amin'ny fiainan-tsy hita".
Amin'izao fotoana izao dia ekena fa nivoatra amin'ny maha fiekem-pinoana momba ny batemy na batisa azy io fiekem-pinoana io. Misy fanovan'io fiekem-pinoana io maro hita tao amin'ny soratr'ireo [[Rain'ny Fiangonana]] toa an'i [[Ireneo avy any Logdanoma|Ireneo]] (latina: ''Irenaeus'') sy i [[Tertoliano]] (latina: ''Tertullianus''), izay iantsoana ireo fiekem-pinoana ireo hoe "fitsipi-pinoana". Tamin'ny taonjato faha-8 dia nisy fiekem-pinoana sahala amin'ny apostolika tao amin'ny soratr'i Md Pirmino (latina: ''Pirminius'').
Ny Fiekem-pinoana apostolika dia ampiasaina amin'ny batisa ao amin'ny ankamaroan'ny Fiangonana tandrefana. Ambara ny Fiekem-pinoana apostolika ao amin'ny Fiangonana katolika amin'ny fotoam-pivavahana isan'andro. Ao amin'ny ankamaroan'ny Fiangonana protestantaprôtestanta dia ampiasaina io fanekem-pinoana io amin'ny fanompoam-pivavahana isan'Alahady. Ny Anglikana sy ny Loterana dia mampiasa azy amin'ny vavaka maraina sy hariva.
Tsy ampiasain'ny Fiangonana Tatsinanana (isan'izany ny [[Fiangonana ortodoksa|OrtodoksaÔrtôdôksa]]) ity fiekem-pinoana ity noho izy tsy mino fa ny Apostoly tokoa no nanoratra azy satria raha izany no izy dia tsy maintsy ho hita tao amin'ny [[Asan'ny Apostoly|Asan'ny Apôstôly]] izany. Ny [[Fanekem-pinoana nikeana]] no ampiasain'ny Fiangonana ortodoksaôrtôdôksa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/993432"